दूध र दही: कति फाइदाजनक, कति हानिकारक? – Health Post Nepal
दूध र दही: कति फाइदाजनक, कति हानिकारक?
२०७८ चैत २० गते १२:५१
हाम्रो समाजमा दुधका बारेमा धेरै गलत धारणा पाइन्छन् । हाडजोर्नीका लागि क्याल्सियमको आपूर्ति गर्न प्रशस्त मात्रामा दुध खाने धेरै छन् । प्राचिनकालदेखि नै दैनिक दुध खाने चलन भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पोषणको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दुधलाई एउटा पोषिलो खानाको रुपमा मान्न सकिन्छ।
दुधबाट फ्याट (तर) भिकेर दही बनाएको खान मिल्छ । फ्याट वा गुलियो नभएको दही स्वास्थ्यका लागि बरु राम्रो मानिन्छ । प्रतिदिन खानामा चिल्लो कम भएको सादा (गुलियो नभएको) दही खानु राम्रो हुन्छ । यसले खानालाई स्वादिष्ट | मात्रै होइन, स्वस्थकर पनि बनाउँछ ।
नेशनल कार्डियाक सेन्टरको ब्लगबाट